सरकार र सत्याग्रही केसीबीच ८ बुँदे सहमति | eAdarsha.com
सरकार र सत्याग्रही केसीबीच ८ बुँदे सहमति
सरकार र डा. केसीबीच सहमति हुँदै ।
पोखरा, २५ असोज । सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच सहमति जुटेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको ६ बुँदे माग राख्दै १९ औं पटक अनशन बसेको २७ औं दिनमात्र गएराति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो । सहमति भएसँगै डा. केसीले आइतबार अनशन तोड्ने भएका छन् । यसअघि पछिल्ला २ दिन भएको वार्ता असफल बन्दै आएको थियो ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा र डा केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो।